မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရောင်းရန် / ငှားရန် ရှိသော တိုက်ခန်းများ ရောင်းရန် - Penthouse
Advertised by MTP Construction
ဧရိယာ : 893 sqft
မြောက်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	750 သိန်း
Advertiser : MTP Construction
Phone : 09-5011446, 09-73204167,01-386802,…
ရောင်းရန် - 8 Floor
မြောက်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	950 သိန်း
ရောင်းရန် -7Floor
ရောင်းရန် - Penthouse
ဧရိယာ : 936 sqft
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,400 သိန်း
ရောင်းရန် -6Floor
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,150 သိန်း
ရောင်းရန် - သတိပဠာန်လမ်း
တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	575 သိန်း
Asking Price : 575 သိန်း
Phone : 01-209429, 095110173
ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဝေဘာလမ်း ရှိ တိုက်ခန်းသန့် ရောင်းမည်။ တိုက်ခန်း
Advertised by Ma Nwe…
သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဝေဘာလမ်း ရှိ တိုက်ခန်းသန့် ရောင်းမည်။ သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	260 သိန်း
Advertiser : Ma Nwe Ni
သင်္ဃန်းကျွန်း သီရိဝေဘာလမ်း ရှိ တိုက်ခန်းသန့် ရောင်းမည်။ သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Phone : 09979895085, 09254400775
ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာ သန္တာ ၁၂လမ်း ရှိ ဈေးနှုန်းချိုသာသော တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
Advertised by San Tun
ဧရိယာ : 918 sqft
မြောက်ဥက္ကလာ သန္တာ ၁၂လမ်း ရှိ ဈေးနှုန်းချိုသာသော တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
မြောက်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	280 သိန်း
Phone : 09-799729406, 09-421726082
ငှားရန် - 112 - ရေကျော်လမ်းမရှိ လုပ်ငန်းကောင်းမြေညီ . . .
ဧရိယာ : 875 sqft
09-4280 22822, 09-4280 22833
112 - ရေကျော်လမ်းမရှိ လုပ်ငန်းကောင်းမြေညီ . . .
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	15 သိန်း
Phone : 09-4280 22822, 09-4280 22833
ရောင်းရန် - သာကေတ ဝေဇယန္တာ၁၇လမ်း ရှိ တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
သာကေတ ဝေဇယန္တာ၁၇လမ်း ရှိ တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	460 သိန်း
ငှားရန် - သီရိဂုံအိမ်ယာ တိုက်ခန်း
Advertised by Tun Win
Listed on 22 September 2016
သီရိဂုံအိမ်ယာ သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3 သိန်း
Advertiser : Tun Win
သီရိဂုံအိမ်ယာ သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Phone : 09977469337
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း ၊ ခေမာလမ်းရှိ ရောင်းရန်ရှိသော တိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
09 26 400 96 96, 09 26 400 97…
စမ်းချောင်း ၊ ခေမာလမ်းရှိ ရောင်းရန်ရှိသော တိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,200 သိန်း
Phone : 09 26 400 96 96, 09 26 400 97…
ငှားရန် - ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
Phone : 09-257998588, 09-43098621
ငှားရန် - အလုံ ဆင်ရေကန်လမ်းတွင် ပထမထပ်အခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
ဧရိယာ : 600 sqft
အလုံ ဆင်ရေကန်လမ်းတွင် ပထမထပ်အခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3.50 သိန်း
Asking Price : 3.50 သိန်း
ငှားရန် - သာဓုအိမ်ရာတွင် ပထမထပ် အခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
သာဓုအိမ်ရာတွင် ပထမထပ် အခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	5.50 သိန်း
ငှားရန် - ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားအနီး ကမ်းနားလမ်းမတွင် အခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားအနီး ကမ်းနားလမ်းမတွင် အခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	5 သိန်း
ငှားရန် - ဓမ္မစေတီလမ်းမပေါ် မြေညီအခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
ဓမ္မစေတီလမ်းမပေါ် မြေညီအခန်းငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	20 သိန်း
ငှားရန် - ကုန်သည်လမ်းမ မြေညီထပ်ငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
ကုန်သည်လမ်းမ မြေညီထပ်ငှားရန်ရှိသည်။(PMS Real Estate Service)
ကျောက်တံတား | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	36 သိန်း
Asking Price : 36 သိန်း
ငှားရန် - လသာ၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း ရှိ ငှားရန်ရှိသော ၃ လွှာအခန်း (Malihku Real Estate)
လသာ၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း ရှိ ငှားရန်ရှိသော ၃ လွှာအခန်း (Malihku Real Estate)
လသာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,000 USD
လသာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ ၄၂ လမ်း အောက်ဘလောက် ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော မြေညီတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
ဧရိယာ : 504 sqft
ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ ၄၂ လမ်း အောက်ဘလောက် ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော မြေညီတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,250 သိန်း
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း၊ စမ်းချောင်းလမ်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ထပ်ခိုးပါ မြေညီတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
ဧရိယာ : 1036 sqft
စမ်းချောင်း၊ စမ်းချောင်းလမ်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ထပ်ခိုးပါ မြေညီတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,400 သိန်း
ငှားရန် - ကမာရွတ်၊ ရွှေပိတောက်ရိပ်မွန် ရှိ ငှားရန်ရှိသော ၄ လွှာအခန်း (Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်၊ ရွှေပိတောက်ရိပ်မွန် ရှိ ငှားရန်ရှိသော ၄ လွှာအခန်း (Malihku Real Estate)
ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	9 သိန်း
ရောင်းရန် - ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေမှကြည့်မြင်တိုင်လမ်းသန့်တွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Advertised by Golden…
01- 9317833 /09-5148486/ 09- 785148486
ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	550 သိန်း
Phone : 01- 9317833 /09-5148486/ 09- 785148486
ရောင်းရန် - ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေမှဗဟန်းရန်ကင်းစင်တာအနီးတွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	500 သိန်း
ငှားရန် - ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေမှမရမ်းကုန်း7မိုင်တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	12 သိန်း
ငှားရန် - ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေမှကမာရွတ်စိန်ဂေဟာအနီးတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ဧရိယာ : 1400 sqft
ငှားရန် - ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေမှပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	7 သိန်း
ငှားရန် - ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေမှဒဂုံမြို့နယ်လမ်းသန့်တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,000 USD
ငှားရန် - ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေမှဗိုလ်တထောင်လမ်းသန့်တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	6.50 သိန်း
ငှားရန် - လှိုင်၊ပါရမီလမ်းမ၊ 875 Sqft, Hall,ကြွေခင်း၊ လုပ်ငန်းရ၊ မြေညီထပ်၊ 8.5 သိန်း
လှိုင်၊ပါရမီလမ်းမ၊ 875 Sqft, Hall,ကြွေခင်း၊ လုပ်ငန်းရ၊ မြေညီထပ်၊ 8.5 သိန်း
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	8.50 သိန်း
Phone : 01-653493,09-422477773,0943069722
Copyright © 2011-2016 ShweProperty.com. All rights reserved.